अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति ? Canada Nepal
अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पटक पटक कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरिरह्यो । विशेषगरी गत फागुन २३ गतेको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर पटक पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहे ।
संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको दाउ
त्यसपछि कांग्रेसले दलीय छलफल गरे पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा तदारुकता देखाएन । कारण थियो, देउवाको इच्छाबिना नै सरकारको नेतृत्व लिने पार्टीको निर्णय ।
अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्लान् ?
ओली सरकारको विकल्पमा देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि यही वैशाख २७ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिए यही सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने छ भने विश्वासको मत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेइतरका दुुई दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउन संसदमा अंकगणितले साथ दिँदैन । यसका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा मिल्नुपर्ने हुन्छ । तर, जसपाभित्रको आन्तरिक विवादले यसलाई सम्भव गराउनेमा आशंका छ ।
गृहमन्त्री पदले जसपामा भूइँचालो
बैशाख २१, २०७८ मंगलवार ११:३२:५६ बजे : प्रकाशित